ARA-DALÀNA NY ORINASA MAIMAIM-POANA FANAMPIANA ARA-DALÀNA
Tena mahay ny mpisolovava, dia henoy tsara ho Anao ary manolotra ny tsara indrindra amin’ny vahaolana ny olana.
Rehetra ny mpisolovava ireo matihanina izay tia ny asa. Afaka matoky antsika.
Ny tena tanjona dia ny fanatanterahana ny zon’ny olom-pirenena mba handray maimaim-poana ny mahafeno fepetra ara-dalàna ny fanampiana, ny fanampiana eo amin’ny fiarovana ny zon’olombelona sy ny ara-dalàna tombontsoan’ny mpanjifa.
Isika fikarakarana ary fantatsika ny fomba hanampiana Anao!
Inona no tombony ny Fandaminana?
Open fifandraisana amin’ny mpanjifa. Ny mpiasa sy ny fitantanana dia misokatra foana sy azo mba hifandraisana Aminao. Ho foana ny hahazo fanazavana marina momba ny fanatanterahana ny andraikitra notendrena.
Fahalalam-pomba ry zareo. Dia homena feno sy marina ny vaovao mikasika ny fanatanterahana ny andraikitra notendrena. Mampanantena isika afa-tsy izay dia afaka mitondra sy tsy handray unwinnable toe-javatra.
Avo ny kalitaon’ny asa. Manompo ny asa ara-dalàna amin’ny traikefa be amin’ny fanomezana ara-dalàna ny asa. Ny tsirairay amin’izy ireo dia manana ny ara-dalàna ny mombamomba azy, isaky ny miresaka amin’ny hafa ny faritra ny lalàna sy mahafantatra azy tsara.
Ny fanomezana maimaim-poana fanampiana ara-dalàna. Ny fikambanana dia iray amin’ireo vitsy ao an-tanànan’i Chelyabinsk, ny fanomezana maimaim-poana fanampiana ara-dalàna. Isika dia foana ny fanitarana ny lisitry ny asa nomen’ny asa maimaim-poana. Amin’izao fotoana izao dia tsy ara-dalàna ny toro-hevitra sy fanampiana ao amin’ny fanomanana ny antontan-taratasy ara-dalàna sy ny isan-karazany ny tolotra ara-pitsarana ny karazana toe-javatra momba ny fiarovana ny zon’ny mpanjifa.
ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA MOMBA NY FIANAKAVIANA IANAO →
← FREE TOROHEVITRA ARA-DALÀNA NY FISORATANA ANARANA AMIN'NY ATERINETO